Liistada Xidhmada Cadaadiska Cadaadiska leh Baqshadaha ayaa amni iyo ilaalinaya dukumiintiyada ku dhegan banaanka xirmada.
Cabir: 4.5 "x5.5"
Dhumucdiisuna: Top 45mic gunta 35mic
Midab: Casaan & madow
Daabac: LIISKA XIRIIRKA LAGU DUUBAY
Koollo: xabag dhalaal kulul oo tayo sare leh (is-soo saaray)
Liistada Baakadaha Liistada Cadaadiska Cadaadiska ayaa si ballaaran loo isticmaalaa si loo ilaaliyo loona ilaaliyo dukumiintiyada ku xiran banaanka xirmada inta lagu jiro shixnadaha.
Cabir: 235 × 175 mm
Dhumucdiisuna: Top 30mic hoose 20mic
Midabka: Liinta & madow ama kuwa kale si waafaqsan shuruudaha
Daabac: KHAYRKA LAGU DARYEELAY / LA HELAY
Calaamadda kuleylka tooska ahi waa nooc kharash-ku-ool ah ah oo lagu sameeyo habka daabacaadda kuleylka tooska ah. Nidaamkan, madaxa daabacaadda kuleylka waxaa loo isticmaalaa in lagu xusho aagag gaar ah oo warqad dahaarka leh, thermo-chromatic (ama thermal) ah. Kaydka calaamadaha kuleylka tooska ah ayaa beddeli doona midabka (badanaa madow) marka la kululeeyo. Qalabka kuleylka ee qaabka xarfaha ama sawirrada ayaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro sawir ku yaal calaamadda. Calaamado gaar ah ayaa si fudud loogu samayn karaa goobta qaabkan.
Cabbirka: 4 * 6 ”
Waxyaabaha: warqad kulul oo toos ah
Dhumucdiisuna: 130 gsm
Dhexdhexaad: 1 ”ama 3”
Tirada: 1000 kumbiyuutar / duub
Midab: caddaan ama midabbo kale
Daabac: cad ama horay loo sii daabacay sida loogu baahan yahay
Qaab: nabar soo baxay (ikhtiyaari ah: nabar ku jira)
Baakadaha: 4 duub / kartoon
Boostada adag ee polyolefin-ka waxay ka ilaalisaa alaabada qoyaanka inta lagu jiro shixnadaha.
Cabbirka: 6 × 9 + 1.5 ”
Dhumucdiisuna: 60 mm
Khadka daloolka: 1-2 sadar (ikhtiyaar)
Daabacaad: Ilaa 9 midab
Calaamadda kala-wareejinta kuleylka waa qayb ka mid ah warqad kala-wareejin kuleyl leh oo leh dhejisyo la daabacayo, caadi ahaan, waxaa lagu dhejiyay weel ama badeecad, taas oo ay ku qoran tahay ama lagu daabacay macluumaad ama astaamo ku saabsan sheyga ama shayga.
Waxyaabaha: waraaqda wareejinta kuleylka
Waraaqda xumbadu waa baqshad suuf ah, oo sidoo kale loo yaqaan warqad suuf ah ama barkimo ah ama boorso jiffy ah, waa baqshad ay kujirto suuf ilaalin ah si loo ilaaliyo waxyaabaha inta lagu jiro rarka. Waxay ka samaysnayd warqad cad ama dahab dahab ah oo khafiif ah oo lagu daboolay xumbo si loogu fidiyo wax soo saarka iyo ka saarista. Boostada xayeysiinta ee shaabadaysan waxay ka kooban tahay xarig dhejis ah furitaan fudud oo fudud.
Cabbirka: 6 × 9 + 1.57 "
Waxyaabaha: warqad kraft dahab ah
Dhumucdiisuna: 110 gsm
Baakadaha: 250 kumbiyuutar / kartoon